dr mg mg kyaw၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
dr mg mg kyaw
Malechauk,magwayMyanmar Like0members like this
ဘလော့များဆွေးနွေးချက်များအဖွဲ့များဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ dr mg mg kyaw's Likes Dr mg mg kyaw's ၏မိတ်ဆွေများ
dr mg mg kyaw သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
dr mg mg kyaw၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ
dimplemit leftacomment for dr mg mg kyaw"အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်ဆရာ။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေနော်။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:317977"Apr 8hla moe 24 leftacomment for dr mg mg kyaw"မွေးနေ့ မင်္ဂလာပါ အကိုရေ ....လိုအင်ဆန္ဒ တွေပြည့်ပါစေဗျာ..ညီငယ် လှမိုး"Aug 13, 2012dr mg mg kyaw and ဦးကောက် are now friendsJul 17, 2012dr mg mg kyaw and naybonelatt (ပုတီးကုန်း ) are now friendsJul 1, 2012လင်းကိုကို leftacomment for dr mg mg kyaw"ဆရာ ဆရာတို့ပြောတဲ့ မိုးပြာဂိုဏ်း ဆိုတာကို ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတယ်. ကျွန်တော် လေ့လာလို့ ဖြစ်နိုင်မလား."Apr 22, 2012လင်းကိုကို leftacomment for dr mg mg kyaw"သင်သည်... အတွေး ကောင်းသော သူလား (သို့မဟုတ်) အကောင်းတွေးသောသူလား
အပြော ကောင်းသော သူလား (သို့မဟုတ်) အကောင်းပြောသောသူလား
အလုပ် ကောင်းသော သူလား (သို့မဟုတ်) အကောင်းလုပ်သောသူလား
အကျင့် ကောင်းသော သူလား (သို့မဟုတ်)…"Apr 18, 2012dr mg mg kyaw and လင်းကိုကို are now friendsApr 17, 2012dr mg mg kyaw and Ko Chit are now friendsMar 5, 2012Ko Chit leftacomment for dr mg mg kyaw"အခွင့်သာလျှင် သာသလို ဓမ္မဆွေးနွေးမှုများတွင်တွေ့ ပါရစေခင်ဗျာ....အကို ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပါစေ"Mar 4, 2012dr mg mg kyaw and ဇော်ရဲ are now friendsFeb 29, 2012နေချို leftacomment for dr mg mg kyaw"မင်္ဂလာပါ အန်ကယ်။
ပဌာန်းအဓိဌာန်နဲ့ပတ်သက်ပီး ကွန်းမင့်လေးပေးထားတာ သမီး အ၇မ်းသဘောကျပါတယ်။"Oct 18, 2011dr mg mg kyaw commented on အရှင်ဝိမလဝံသ's blog post 'ပဋ္ဌာန်းမရွတ်မီ အဓိဋ္ဌာန်ပုံနှင့် သစ္စာပြုပုံ'"အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိုသိပြီး ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါ မပါ သဘောတရားသက်သက်မျှသာဖြစ်ကြောင်း နှလုံးသွင်းဆင်ခြင် ကြပါလျှင် ပိုကောင်းမည်ထင်ပါသည်။"Oct 17, 2011dr mg mg kyaw commented on aungaung's blog post 'မေတ္တာအကျိုး (၁၁)မျိုး'"မေတ္တာ သုတ်ရွတ်ခြင်း အကျိုး ဟု မဆိုသင့်ပါ။
မေတ္တာ ပို့ခြင်း အကျိုး ဖြစ်ပါသည်။
မေတ္တာ ကမ္မဌာန်း ၏ အာရုံမှာ သတ္တ၀ါ ပညတ် ဖြစ်သည့် အတွက် မေတ္တာပို့ခြင်းသည် သမထ ကမ္မဌာန်း သာဖြစ်ပါသည် အာနိသင်မှာ လောကီဈာန် သာဖြစ်ရပါမည်။
ပရမတ်အာရုံ ကို မရသည့်အတွက်…"Sep 20, 2011နီစံ (အနီ) and dr mg mg kyaw are now friendsSep 6, 2011dr mg mg kyaw commented on ကောင်းမြတ်မင်း's blog post 'ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ကို Apple ကုမ္ပဏီမှ ဒီဇိုင်နာ က စော်ကားလိုက်ခြင်း'"ဒီဇိုင်နာကိုကန့်ကွက်ပါတယ် မင်းဟာ တစ်ခြားလူပေါင်းများစွာ ကြည်ညို လေးစားကြတဲ့ ဆရာသမားတစ်ဦး ကို ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချဖို့ ကြိုးစားရင်း မလေးမစား မတော်မတရား စော်ကားမိနေပြီ မင်းလုပ်ရပ်ဟာ ဆိုးကျိုးအများကြီး
ပေးလိမ့်မယ် မင်းဟာ…"Sep 2, 2011နီစံ (အနီ) leftacomment for dr mg mg kyaw"မင်္ဂလာပါရှင်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
မေးလ်ထဲမှ…"Sep 1, 2011 More... RSS
11:52pm အချိန်April 8, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်ဆရာ။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေနော်။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:317977 10:29pm အချိန်February 10, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:293069 7:43pm အချိန်August 13, 2012, တွင်hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မွေးနေ့ မင်္ဂလာပါ အကိုရေ ....လိုအင်ဆန္ဒ တွေပြည့်ပါစေဗျာ..ညီငယ် လှမိုး 10:39am အချိန်April 22, 2012, တွင်လင်းကိုကို မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဆရာ ဆရာတို့ပြောတဲ့ မိုးပြာဂိုဏ်း ဆိုတာကို ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတယ်. ကျွန်တော် လေ့လာလို့ ဖြစ်နိုင်မလား. 6:59pm အချိန်April 18, 2012, တွင်လင်းကိုကို မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ သင်သည်... အတွေး ကောင်းသော သူလား (သို့မဟုတ်) အကောင်းတွေးသောသူလား
အကျင့် ကောင်းသော သူလား (သို့မဟုတ်) အကောင်းကျင့်သောသူလား
အာရုံတို့၏ အခိုင်းခံလား (သို့မဟုတ်) အာရုံတို့ကို ခိုင်းနိုင်သလား
သင်သည်........... 9:50pm အချိန်March 4, 2012, တွင်Ko Chit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အခွင့်သာလျှင် သာသလို ဓမ္မဆွေးနွေးမှုများတွင်တွေ့ ပါရစေခင်ဗျာ....အကို ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပါစေ 10:29pm အချိန်December 14, 2011, တွင်u aung kung mon မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ၀င်လယ်သာံးသည် 8:45pm အချိန်October 18, 2011, တွင်နေချို မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါ အန်ကယ်။
ပဌာန်းအဓိဌာန်နဲ့ပတ်သက်ပီး ကွန်းမင့်လေးပေးထားတာ သမီး အ၇မ်းသဘောကျပါတယ်။ 11:56pm အချိန်September 1, 2011, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါရှင်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
မေးလ်ထဲမှ သူငယ်ချင်းများကို ဖိတ်ခေါ်ရန်
ဆွေးနွေးချက်များမှာ လာရောက် ဆွေးနွေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်
ယနေ့ ဘာသာရေး စာပေ ဘလော့များ
တို့ကိုလဲ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ 11:29pm အချိန်September 1, 2011, တွင်စန္ဒာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါရှင်။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
Top News · Everything mun mun aung liked dimplemit's blog post 'ပုညကြိယ၀တ္တု(၁၀)ပါး'18 minutes agoThaung Tan liked dimplemit's blog post 'တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည်....၂'1 hour agoThaung Tan liked dimplemit's blog post 'တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည် ....၃'1 hour agoThaung Tan liked dimplemit's blog post 'တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည်....၁'1 hour agothuthunaing postedastatus"ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းမှုပါ"1 hour ago 0
ဓနုလေးဖိုးအော် liked မောင်မြင့်'s blog post 'ကဆုန်လပြည့်နေ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် မြင်ကွင်းများ'1 hour agothuthunaing commented on အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'မနေသူတွေထဲမှာ နေပါ..'"မှတ်သားထားပါ့မယ်"1 hour agoဇော်ထက်မောင် commented on မောင်မြင့်'s blog post 'ကဆုန်လပြည့်နေ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် မြင်ကွင်းများ'"သာဓု သာဓု သာဓုပါခင်ဗျာ ကြည့်ရှုသွားပါတယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ အခါကြီးရက်ကြီးမျိုး…"2 hours agoမောင်မြင့် postedablog postကဆုန်လပြည့်နေ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော် မြင်ကွင်းများ ကဆုန် လပြည့်နေ့ ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုအတွက် အထွဋ်အမြတ်ထားရာ နေ့ထူးနေ့မြတ် ။ ကဆုန် လပြည့်…See More3 hours ago 1
ဇော်ထက်မောင် postedablog postဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်တွင်းရှိ ဓမ္မဘလော့ဘ်ရေးသားသူများ (မျှဝေဓမ္မဒါနပြုသူများ) သို့ မေတ္တာရပ်ခံလွှာကျွန်ုပ်တို့၏ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ(ဓမ္မ)ဆိုဒ်သည် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်မှစ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဟန်း၊ရှင်၊လူ အများအတွက်..၁။…See More3 hours ago 0
aung aung soe commented on dimplemit's blog post 'တန်ဖိုးသိမှ တန်ဖိုးရှိမည်....၁'"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"3 hours agoye latt, အားလုံးမင်္ဂလာပါ, ကျော်ကျော်အောင် and4more joined ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺4 hours ago More... RSS